I-boot disk igcwele ku-Mac? Tricks ukukhulula isikhala! | Ngivela kwa-mac
Njengomthetho ojwayelekile, abasebenzisi kufanele bagcine izinto eziningi, ngombhedo wokuthi uma kungenzeka ngiwudinge usuku olulodwa, kuze kufike isikhathi lapho noma Uhambisa indlu uyohlala endlini yokugcina impahla Noma uqala ukulahla konke obucabanga ukuthi uzokudinga ngolunye usuku kepha ngemuva kweminyaka eminingana usubonile ukuthi kwakungamampunge ombuso.
Uma sikhuluma ngobunzima bethu, icala liyafana ncamashi. Ezikhathini ezingaphezu kwesisodwa, idokhumenti, isithombe noma ividiyo idluliselwe kithi futhi sayikopisha kwikhompyutha yethu ngenhloso yokuyithokozela buthule, kepha cnesikhathi siyakhohlwa futhi iwela ekukhohlweni kuze kube ekugcineni ifayili elilodwa elilodwa elithatha isikhala ngokungadingekile ku-Mac yethu.
Kepha kwenzeka okufanayo ngezithombe noma amavidiyo esiwalanda ku-inthanethi, kepha ikakhulukazi ngamavidiyo we-movie. Eminyakeni yamuva nje, ubukhulu balolu hlobo lwevidiyo bebulingana no-2 GB, isikhala esingabiwa ngaphandle kwezinkinga kwi-hard drive yethu, uma kukhona ama-movie ama-2 noma ama-3, kodwa uma siqala ukukhipha ngakwesokudla futhi sishiya konke okuwela ezandleni zethu, i-hard drive yethu enkulu izoba yi-tangle yamafayela angenasidingo ngokuhamba kwesikhathi okuzothinta ukusebenza kwe-Mac yethu.
Kunoma isiphi isistimu yokusebenza kuhlale kuneseluleko sokuthi okungenani sibe nesikhala samahhala esingu-10% ukuze uhlelo lusebenze kalula ngaphandle kokubonisa izinkinga zokusebenza. Futhi i-OS X iyathinteka. Uma sibona ukuthi iMac yethu uqala ukucabanga izinto kaningi, kuzofanele sibheke indawo yokugcina nokuthi isatshalaliswa kanjani ukuthola umbono wokuthi kufanele sidlulise umshanelo kuphi. Ukuze wenze lokhu, chofoza kumenyu ye-Apple > Mayelana nale Mac> Imininingwane eminingi> Isitoreji.
Le menyu izosikhombisa ukuthi sisabalalise kanjani isikhala kwi-Mac yethu: amavidiyo, izinhlelo zokusebenza, izithombe, umsindo nokunye. Njengoba ukwazi ukubona esithombeni esingenhla, iningi le-hard drive ngamavidiyo alandelwa yilowo muntu ongaziwa obizwa ngokuthi Abanye, okuhlala kunzima kakhulu ukukhomba futhi kwesinye isikhathi kungenzeki. Kulokhu, kusobala ukuthi uma ngidinga ukwenza isikhala kwi-Mac yami kuzofanele ngilahle ingxenye enkulu yalawo mavidiyo, kungaba ngokuwakopisha kudrayivu yangaphandle noma ukuwasusa uma ngingawadingi ngempela. .
1 Khulula isikhala ku-Mac hard drive yakho
1.1 Susa izipele ze-iTunes
1.2 Hambisa imininingwane kuma-hard drive angaphandle
1.3 Susa izinhlelo zokusebenza esingazisebenzisi
1.4 Susa izilimi ezifakwe ngaphambilini
1.5 Yini engiyenzayo ngesikhala "Abanye" abahlala ku-Mac yami?
1.6 Hlaziya usayizi wamafayela kwi-hard drive yakho
1.7 Sula umlando wokuphequlula
1.8 Sula inqolobane yeziphequluli esizisebenzisayo
1.9 Susa amafayela wesikhashana
1.10 Thola amafayela ayimpinda
1.11 Bheka ifolda Yokulanda
1.12 Susa konke kudoti
1.13 Shintsha i-hard drive
1.14 Phatha isitoreji nge-MacOS Sierra
Khulula isikhala ku-Mac hard drive yakho
Enye yezinzuzo eziningi i-OS X esinikeza zona ngokuqhathaniswa neWindows, ukuthi kusuka esigabeni seSitoreji esikubonayo ngaso sonke isikhathi Hlobo luni lwamafayela athatha isikhala esiningi kwi-hard drive yethu, ukuze uma wonke amafayela ethu sihlelwe kahle, sizokwazi ngokushesha ukuxazulula izinkinga zesikhala ezithinta i-hard drive yethu.
Susa izipele ze-iTunes
Yize izinguqulo zakamuva zazo zombili i-iOS ne-iTunes zikwenza kungadingeki ukuxhuma amadivayisi wethu kwi-Mac cishe, njalo sidinga ukuyixhuma ukwenza isipele sedivayisi yethu, kungaba yi-iPhone, i-iPad noma i-iPod touch, isipele esizosiza uma sizokhipha i-jailbreak idivaysi yethu noma uma sizobuyekeza kunguqulo yesimanjemanje ye-iOS ngoba phakathi nenqubo okuthile kungahle kwehluleke futhi kuzodingeka ukuthi sibuyisele idivayisi yethu ekuqaleni futhi siyibuyisele isipele nazo zonke izinhlelo zokusebenza nolwazi ebesilugcine kulo.
Uma sinamadivayisi amaningi, lezi zipele zingathatha ama-gigabytes ambalwa. Uma, njengomthetho ojwayelekile, singavami ukwenza ukufakwa okuhlanzekile kwenguqulo entsha ngayinye yohlelo olusetshenziswa i-Apple minyaka yonke, kepha simane sibuyekeze, kungenzeka ukuthi eminyakeni edlule, amadivayisi namakhophi amaningi adlulile izandla ukuphepha okufanayo kuqhubeka ukugcinwa ku-iTunes. Isipele ngasinye singathatha ama-gigabytes ambalwa, ama-gigabyte esingakwazi ukuwakhulula masinyane ngokufinyelela kumakhophi wesipele nokususa eyodwa kumadivayisi angasenayo.
Ukuze senze lokhu kufanele siqale sivule i-iTunes futhi kwimenyu ephezulu ye-iTunes chofoza kokuncamelayo. Okulandelayo siya kumadivayisi. Kulesi sigaba sizothola amakhophi wesipele wamadivayisi ethu. Uma sithola noma yiziphi ezingasekho ezandleni zethu kufanele simane nje sikwenze chofoza kukho bese ukhetha Susa isipele.
Hambisa imininingwane kuma-hard drive angaphandle
Njengamanje eIntengo yama-hard drive angaphandle yehle kakhulu eminyakeni yamuva, futhi njengamanje singakwazi ukuyifaka ngaphansi kwama-euro angama-100, ngamandla adlula i-2 TB. Lesi yisixazululo esihle njalo uma udinga ukusebenza njalo namafayela amakhulu ngenxa yomsebenzi wakho futhi angamavidiyo ongawasusa.
Okufanele ngaso sonke isikhathi ukuwahambisa kudrayivu yangaphandle lapho sesiyekile ukusebenza nabo futhi siyazi ukuthi isikhathi eside ngeke sizidinge, ngoba uma kungenjalo ukuphela kwento esizoyenza uma sizisusa ngaphambi kwesikhathi ukuchitha isikhathi esiningi sizikopisha zisuka kolunye uphiko ziye kolunye.
Ngokuvamile ama-hard drive angaphandle aqinile, hhayi i-SSD, ngakho-ke ukusebenza ngqo kudrayivu yangaphandle kungathatha isikhathi eside Yize lokho okudingeka sikwenze ukuphinda kulungiswe kabusha okuncane kodwa lokho ekugcineni kusiphoqa ukuthi sithumele yonke ividiyo futhi, esimweni lapho sisebenzisana nalolu hlobo lwamafayela. Uma, ngakolunye uhlangothi, sisebenza ikakhulu ngezithombe, singazihlela ngaphandle kwenkinga ngqo kusuka kudrayivu yangaphandle, noma ngabe kusithatha imizuzwana embalwa ngaphezulu.
Susa izinhlelo zokusebenza esingazisebenzisi
Este ububi bendawo yonke yazo zonke izinhlelo ezisebenzayo. Umqondo wokulanda izinhlelo zokusebenza ukuzama ukubona ukuthi benzani ngokuhamba kwesikhathi ugcwalisa i-hard drive yethu ngezicelo ezingenamsebenzi esingasoze sazisebenzisa futhi, ngoba isizathu esiyinhloko sokusilanda kwakuwukusebenzisa ithuba lesipho noma ukubheka ukuthi sasilusizo yini izinhloso zethu.
Ukuze senze lokhu kufanele sivule isiqalisi bese siya lapho isithonjana sohlelo lokusebenza sikhona. Ngemuva kwalokho kufanele sihudule siye kuDoti ukuze siyikhiphe kwi-Mac yethu.Noma singavula iSithole, khetha ifolda Yezicelo kwikholamu yesokudla bese hudula uhlelo lokusebenza esifuna ukulususa kuDoti. Le ndlela iyasebenziseka uma sifuna ukususa izinhlelo zokusebenza ezilandwe ngqo kwi-Mac App Store, kepha azilusizo kuzinhlelo zokusebenza esizilande ku-inthanethi.
Kulokhu sizodinga izinhlelo zokusebenza ezisivumela ukuthi sisuse noma yiluphi uhlelo lokusebenza kwi-MacIzicelo ngokuvamile ezingatholakali ku-Mac App Store kepha kufanele siye konjiniyela abavela eceleni. Ku-Mac App Store singathola uhlelo lokusebenza lwe-Dr Cleaner olusivumela ukuthi sikhiphe izinhlelo zokusebenza nokuthi ukusebenza kwalo kulula kakhulu, kepha kwesinye isikhathi akusebenzi ngendlela efanele. Ngaphandle kwe-Mac App Ezinye izinhlelo zokusebenza I-AppZapper y AppCleaner yibo abanikela ngemiphumela emihle kakhulu lapho kususwa noma yiluphi uhlelo lokusebenza.
Susa izilimi ezifakwe ngaphambilini
Njengomthetho ojwayelekile, sisebenzisa kuphela ulimi olulodwa ku-Mac yethu, kepha uma kwenzeka sidinga ukukuguqula, i-Apple ifaka inani elikhulu lezilimi uma kwenzeka sizithola sishintsha ulimi. Lezi zilimi zihlala phakathi kuka-3 no-4 GB, isikhala esibaluleke kakhulu okuthi uma sishoda ngesikhala kwi-hard drive yethu futhi ayikho indlela yokukhulula isikhala esithe xaxa kwezinye izingxenye, singaba yigugu ngempela. Ngenxa yalokhu kufanele sisebenzise isicelo Isi-Monolingual, uhlelo lokusebenza olwenziwe ngokukhethekile ukususa izilimi esingazisebenzisi futhi asihleleli ukuyisebenzisa ngokuzayo futhi ngaleyo ndlela sikwazi ukuthola i-GB yokugcina.
Yini engiyenzayo ngesikhala "Abanye" abahlala ku-Mac yami?
Ngaphezulu sixoxe ngenketho enikezwa umsebenzi we-About this Mac lapho usikhombisa izinhlobo ezahlukahlukene zamafayela esinawo kwi-hard drive yethu. Okusithukuthelisa kakhulu njalo kubizwa ngokuthi "Abanye" ngaphezu kwakho konke lapho ithatha ingxenye ebaluleke kakhulu kwi-hard drive yethu. Lesi sigaba sifaka amanye amafayela angenakuhlukaniswa ngezigaba. Njengomthetho ojwayelekile, le folda ifaka:
Izinto ezikumafolda e-OS X anjengefolda Yesistimu nama-cache.
Imininingwane yomuntu efana nedatha yekhalenda, oxhumana nabo kanye nemibhalo.
Izandiso noma amamojula wohlelo lokusebenza.
Amafayela e-multimedia injini yokusesha ye-Spotlight engakwazanga ukuwahlukanisa njengoba enjalo ngaphakathi kwephakeji.
Onke amafayela ukunwetshwa okungaziwa yi-Spotlight.
Kulezi zimo, kuncane kakhulu esingakwenza, ngoba lawa mafayela ngokuvamile akabonakali kumafolda esiwasebenzisa kaningi. Uma sifuna isikhala esihlala kuso sibaluleke ngempela, kufanele cabanga ukuthi kungenzeka ukufometha i-hard drive uphinde wenze ukufakwa okuhlanzekile futhi, ngaphandle kwamakhophi wesipele angahudula lawa mafayela abekwe ngokuthi "Okunye"
Hlaziya usayizi wamafayela kwi-hard drive yakho
Kwesinye isikhathi inkinga yesitoreji kwi-hard drive yethu ingabonakala kakhulu kunalokho esingakucabanga. Singaba nefayela, noma ngabe yiphi ifomethi, ethatha isikhala esiningi kunokujwayelekile, noma ifolda esola ngokusobala inani lama-gigabytes. Ukuze sikwazi ukuhlaziya konke okuqukethwe kwi-hard drive yethu futhi mhlawumbe thola isisombululo esisheshayo ezinkingeni zethu zokugcina singasebenzisa Idiski Yokusungula X, uhlelo oluzohlaziya yonke i-hard drive yethu olusikhombisa isikhala esithathwa yifolda ngayinye ukuze sizokwazi ngokushesha ukuthola inkinga engaba khona ngesikhala esiku-hard drive yethu.
Kumele ucabangele nje amafolda esiwathola ngaphakathi kwefolda yabasebenzisi, okuyilapho sigcina khona yonke imininingwane. Wonke amanye ama-Applications, Systems ... amafolda akuhlelo futhi akumele siwafake nganoma yisiphi isikhathi hleze sigcine sesidala ukwehluleka okukhulu ohlelweni olusiphoqa ukuthi siphinde sifake uhlelo olusebenzayo.
Sula umlando wokuphequlula
Umlando wokuphequlula umane ungumbhalo, ngaphandle kokufomatha, ngakho-ke usayizi ongahlala ku-Mac yethu awuncane. Le nketho inconywa uma sinezinkinga lapho kulayishwa ikhasi kusiphequluli futhi asikwazi ukuthola idatha ebuyekeziwe ukuthi iboniswe.
Sula inqolobane yeziphequluli esizisebenzisayo
Ngokungafani nomlando wokuphequlula, i-cache ingathatha ingxenye ebalulekile ye-hard drive yethu, njengoba kungamafayela asheshisa ukulayishwa kwamakhasi esivamise ukubonisana nawo, ukuze nje ulayishe idatha eshintshile, njengokujwayelekile umbhalo, hhayi lonke ikhasi, eligcinwe kunqolobane yethu isiphequluli. Ukwenza lo msebenzi ngokushesha nakuzo zonke iziphequluli singasebenzisa izinhlelo ezinjenge-CleanMyMac, okungathi ngemizuzwana embalwa isuse noma iyiphi insalela kunqolobane yeziphequluli zethu.
Susa amafayela wesikhashana
Amafayela esikhashana angesinye sezici ezimbi zazo zonke izinhlelo ezisebenzayo. Alukho uhlelo olusebenzayo olusinikeza uhlelo oluzenzakalelayo ukuthi Kunikezelwe ukususa ngezikhathi ezithile lezi zinhlobo zamafayela esiwasebenzisa kuphela kanye, ikakhulu lapho sibuyekeza uhlelo lokusebenza lube inguqulo entsha, ebuyekezwa kakhudlwana. Ngokuhamba kwesikhathi lawa mafayela ahlala ezindaweni eziyizigaxa zangempela kwi-Mac yethu futhi ngokuwasusa singathola isikhala esikhulu ku-hard drive yethu.
Ukuzisula, singasebenzisa izinhlelo ezifana ne-CleanMyMac, esesivele sishilo ephuzwini elidlule futhi esivumela ukuthi sisule inqolobane nomlando wazo zonke iziphequluli esizisebenzisayo kwi-Mac yethu. Olunye uhlelo lokusebenza oluye isivumela ukuthi sisule ngokushesha lezi zinhlobo zamafayela nguDkt Cleaner kusuka kumenzi we-TREND Micro
Thola amafayela ayimpinda
Kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi silande amafayela, ama-movie noma umculo asevele ekwi-Mac yethu kaningi futhi siwagcina kwamanye amafolda, sikholwa ukuthi besingenawo kwi-hard drive yethu. Ngokuhamba kwesikhathi amafayili ayimpinda zingaba yiphupho elibi ku-hard drive yethu ngenxa yobukhulu obukhulu abangahlala kuzo. Ku-Mac App Store singathola inombolo enkulu yezinhlelo zokusebenza esivumela ukuthi sithole futhi sisuse amafayela ayimpinda atholakala ku-Mac yethu.
Bheka ifolda Yokulanda
Ifolda yokulanda iyindawo lapho wonke amafayela esiwalanda ku-inthanethi agcinwa khona, kungaba ngohlelo lokusebenza lwe-p2p noma ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenza zokuthumela imiyalezo, i-imeyili noma olunye uhlobo. Njengomthetho ojwayelekile, uma sesililandile ifayela esilidingayo, sivamise ukulihambisa kufolda lapho sifuna ukuligcina khona, noma uma kunguhlelo, silifaka ngokushesha. Kulokhu, kungenzeka ukuthi ngokuhamba kwesikhathi sikhohlwe ukususa uhlelo lokusebenza esililandile futhi luzohlala isikhala esibalulekile sediski yethu.
Susa konke kudoti
Yize kungabonakala kungenangqondo, iningi labasebenzisi abakhohlwa ngodoti, indawo lapho sithumela khona wonke amafayela esifuna ukuwasusa ngokuphelele kwi-hard drive yethu. Kepha azisuswa ngempela size sizithulule ngokuphelele ngakho-ke ngemuva kokuhlanza ngokuphelele amafayela angenamsebenzi kwi-hard drive yethu, kuyalulekwa ukuwathulula ngokuphelele uma sifuna ngempela ukuhlola ukuthi sishiye isikhala esingakanani kwi-hard drive yethu, uma kwenzeka siqhubeka nokuhlanza noma uma bathole isikhala esanele sokukwazi ukubuyela emsebenzini buthule nge-Mac yethu ngaphandle kwezinkinga zesikhala noma ukusebenza.
Shintsha i-hard drive
Yize kungabonakala njengesixazululo esingenangqondo, uma i-hard drive yethu iba ncane ekushintsheni kokuqala kufanele ukuthi sicabange ngokwandisa isikhala sayo sokugcina. Umqondo uwukuthi yishintshele i-SSD esisinikeza isivinini sokubhala nokufunda ngokushesha okukhulu kunama-hard drive akudala ayi-7.200 500 rpm. Intengo yala ma-hard drive yehle kakhulu ezinyangeni ezedlule futhi njengamanje singathola amandla we-100 GB ngama-euro angaphezu kwe-XNUMX nje.
Kepha uma lawo ma-500 GB ebonakala emancane futhi sinemali yokuyisebenzisa ku-1 noma 2 TB SSD, lezi zinhlobo zibiza kakhulu kunama-hard drive wendabuko, singenza utshalomali olubonakalayo ukwenza lula ukusebenza nokwandisa isitoreji. Kepha uma umnotho wethu ungekho kangako, kuzofanele sisebenzise i-500 GB eyodwa futhi sithenge ukushayela kwangaphandle komthamo esiwudingayo, ukuze ngaso sonke isikhathi sibe nawo wonke amafayela okufanele siwathinte ngezikhathi ezithile kepha kufanele siwenze ngokuchofoza igundane. Ngaphezu kwalokho, leyo yunithi efanayo ingasetshenziselwa ukwenza amakhophi ngeTime Machine futhi sibulala izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa.
Phatha isitoreji nge-MacOS Sierra
Enye yezinto ezintsha esilethelwe yi-macOS Sierra, ngaphandle kokushintsha igama le-OS X ibe yi-macOS, umphathi wesitoreji, osivumela ngemizuzwana embalwa hlola ukuthi hlobo luni lwamafayela esingalususa ngenxa yeminyaka yawo, kungani singawasebenzisi, ngoba ayizimpinda… Le nketho ithiyori inhle kakhulu kepha njengezinye izinhlelo zokusebenza ezithembisa ukwenza okufanayo, kufanele uziqaphele futhi ungazethembi ngokuphelele, ngoba ingenza ukuhlanzwa ngesihluku kwi-hard drive yethu ngaphandle kokusikhombisa ukuthi hlobo luni amafayela ahlela ukususa ukuze athole isikhala esengeziwe kwi-hard drive yethu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Amathiphu wokukhulisa isikhala sakho sediski ku-Mac
Ngisusa wonke amavidiyo ami afaka yonke imibhalo, kodwa-ke uma ngibheka ukugcinwa kwediski ebhuthini kuyabonakala ukuthi aqhubeka nokusebenzisa sonke isikhala sami, agcinwa kuphi? noma ngizisusa kanjani kwi-boot disk
Impela into efanayo yenzeka kimi, ngisuse wonke amavidiyo kuhlelo lokusebenza lwe-PHOTOS ebelifana nokuthile okungu-900, namanje ngaphansi kwalokhu obekuhlala kulo. ngibe sengikhumbula uhlelo lokusebenza lwe-iPhoto engisalufakile futhi lapho nganginezithombe namavidiyo amaningi, ngazisusa lapho ngazifaka kudoti we-iPhoto nangemva kukadoti ethekwini. futhi sekuvele kukhululekile ngokwanele, kepha noma kunjalo baqhubeka nokungiphatha ukuthi yini enye futhi abasaziniki ngokwengeziwe ukubukeka. Ngisuse namavidiyo kufolda eyinqolobane ye-google drive. Ngiphelelwa yimibono.
ubone ukuthi bangasisiza yini.
Ngisuse wonke amasayithi nezinhlelo zokusebenza engicabanga ukuthi zingagcina amavidiyo engiwasebenzise ngaphambilini njengezithombe, i-iPhoto, i-dropbox, i-googledrive, ... kepha noma kunjalo ngine-GB eningi ehlala kwimemori yediski yokuqalisa .
Ngabe ukhona ongangisiza ???
sawubona, ngifake iSierra kwi-mac pro yami ... ngilayishe ifayela ku-iCloud futhi ngasusa ku-mac ifayela engilidingayo ukwenza uhlelo ... ngiyazama ukulilanda futhi kodwa lingitshela ukuthi Awunaso isikhala sediski ...
Sengizilandele zonke izinyathelo futhi sengisuse izinhlelo nezithombe kwi-mac kepha ngisenenkinga yesikhala ...
noma yisiphi isixazululo?
Kwenzeka into efanayo nakimi ngendaba yamavidiyo, anginayo futhi ithi ngine-20GB.Yisiphi isisombululo kulokhu?
I-Australia inweba imininingwane yezokuthutha zomphakathi ku-Apple Maps
I-Apple iqala ukuqasha abasebenzi be-XNUMXth Apple Store eJapan